Burmese Speaking English Audio CD with Burmese Translation -5US$ only
Book & Shop @ MoeMaKa
Posted by Phan Mee Ain - Literature Lovers on February 16, 2009
US$ 5.00 Only
Unknown July 23, 2009 at 6:07 PM
ိက်ေနာ္၀ယ္ခ်င္တယ္ က်ေနာ္မွာ debit card ဘဲရွိတယ္ ၀ယ္လုိရလား
ျပီးေတာ့ စီဒီေခြက အားလုံးဘယ္ႏွစ္ေခြရွိလဲ က်ေနာ္သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ
၀ယ္ခ်င္တယ္ ျပီေတာ့ကားထဲမွာ ဖြင့္လုိ့ရလား က်ေနာ္စီကုိ ေက်းဇူးျပဳျပီး
gmail. ပုိ့ေပးပါေနာ္ က်ေနာ္ gmail လိပ္စာကေတာ့
( maunghtoo82@gmail.com) ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
Unknown August 5, 2009 at 8:19 AM
ေခတ္သစ္ August 31, 2009 at 8:02 AM
က်ေတာ္လဲ လုိခ်င္ပါတယ္ အခုေတာ့ မဝယ္နုိင္ေသးပါဘူး ပုိက္ဆံစုျပီး တေန႔ေန႔ ေတာ့ဝယ္ျဖစ္ဝယ္မယ္
ဇဝါ October 28, 2009 at 10:07 PM
i want to buy this book. i have no credit card! how can i pay?
setgyarwalar December 21, 2009 at 7:39 AM
if you love people from myanmar, you should make as free.
Editor January 20, 2010 at 6:06 AM
၀ယ္ခ်င္တယ္ဆုိတာက ျမန္မာျပည္ထဲက တစ္ေယာက္က
ျမန္မာျပည္ထဲက ၀ယ္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ ဘယ္လိုမ်ား လုပ္ရမလဲ။
မုိးမခ လိပ္စာကုိ စာတုိက္ကေန သြားပုိ႔မယ္ဆုိရင္
စာတုိက္က ျမင္တာနဲ႔ စာသြားပို႔သူကုိ ဖမ္းဆီးႏုိင္မယ္လို႔ ထင္သလား။ အဲဒါေတြကို ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္။
စီဒီတစ္ခ်ပ္လိုေပမယ့္ သူ႔အတြက္ကေတာ့ အေရးပါမွာပါ။
ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာကေတာ့..+66(0)8 3163 0021
Witmone November 16, 2011 at 2:29 PM
ကြ်န္ေတာ့ ဘေလာက္ခ္မွာ ထပ္မံေၾကာ္ျငာထားပါတယ္။
minoo June 22, 2012 at 6:29 PM
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 'ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးရခြင်း' ထွက်ပြီ
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သင်္ချာ) ဘာသာပြန် - 'ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးရခြင်း' ထွက်ပြီ (မိုးမခ၊ ဆိပ်ကမ်းသာ) မတ််၂၇၊ ၂၀၂၀ အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်းမှာ လစဉ်ဘာသာပြန်အခန်းဆက်တက်ဆက်ခဲ့ပြီး မိုးမခအွန်လိုင်းမှာလည်း အပတ်စဉ် မျှဝေခဲ့တဲ့ အနောက်နိုင်ငံစာအုပ်စင်များမှာ လူပြောများတဲ့ စာအုပ် - How Democracies Die - ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးရခြင်း - စာအုပ် ထွက်ပါပြီ။ မိုးမခက ထုတ်ဝေပြီး ဆိပ်ကမ်းသာက ဖြန့်ချိပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၁၃၀၊ တန်ဖိုး ၃ထောင် ကျပ်။ ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာ​စျေးသစ် ။ ဝ၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ဝ၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ ကိုဆက်သွယ် မှာယူနိုုုုုုင်ပါပြီ။ ကိုဗစ်၁၉ ကိုက်ခဲနေတဲ့ ကမ္ဘာမှာ ပိုပြီးမွန်းကြပ်သွားစေမယ့် ဒီမိုကရေစီစနစ်များ ကျဆုံးရခြင်းအကြောင်းကို ဖတ်ဖို့ အများကြီး မတိုက်တွန်းချင်ပါဘူး။ သို့သော် အမေရိကန်က အနောက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတကြီး ဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်မှာ အနောက်ပြည်က ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေ ကျဆုံးနေပြီလား ဆိုတာကို အချိန်မီီ သိရှိ အကဲဖြတ် စဉ်းစားခန်းဝင်နိုင်ဖို့ သည်စာအုပ်က အကူအညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်ဆိုးခေတ်ကြပ်တိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ ခေါင်းဆော
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၆၊ အမှတ် ၃၊ ထွက်ပါပြီ
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း အတွဲ ၆၊ အမှတ် ၃၊ ထွက်ပါပြီ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉ မိုးမခက ထုတ်ဝေပြီး ဆိပ်ကမ်းသာကနေ ဖြန့်ချိတဲ့ မိုးမခမဂ္ဂဇင်း နောက်ဆုံးထုတ် ထွက်ပါပြီ။ ၃ လ တကြိမ် ထုတ်ဝေပြီး၊ ဇူလိုင်၊ ဩဂုတ်၊ စက်တင်ဘာအတွက် အောက်တိုဘာကျမှ ထွက်ဖြစ်တာကိုတော့ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ တန်ဖိုး ၂ ထောင်ကျပ် နဲ့ ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာ​စျေးသစ် ။ ဝ၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ဝ၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ မှာ တအုပ်ချင်း မှာယူနိုင်သလို၊ ရန်ကုန်မြို့က စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာလည်း မေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းသာအွန်လိုင်း ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာကနေလည်း မှာနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးနေ့စဉ်မြင်ကွင်း သတင်းမှတ်တမ်း - တတိယရက် ၃၀ - ပုံနှိပ်စာအုပ် ထွက်ပြီ
မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးနေ့စဉ်မြင်ကွင်း သတင်းမှတ်တမ်း - တတိယ ရက် ၃၀ - ပုံနှိပ်စာအုပ် ထွက်ပြီ (မိုးမခ) ဩဂုတ် ၃၊ ၂၀၂၁ မိုးမခ၏ စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် လုပ်ငန်းရန်ပုံငွေ နဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး အထွေထွေအထောက်အကူပြု အလှုရှင်များအတွက် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပေးအပ်ရန် စီစဉ်ထားတဲ့ နေ့စဉ်ရက်စွဲမှတ်တမ်း သတင်းဆောင်းပါးစာအုပ် ထွက်ပါပြီ။ ၂၅၄ စာမျက်နာ အတွင်းမှာ သတင်းဓာတ်ပုံများနဲ့။ ဒေါ်လာ ၁၀၀ အထက် အလှူရှင်များကို မေတ္တာလက်ဆောင် တအုပ်ပို့ပေးပါတယ်။ စာအုပ်ချည်း ကူညီအားပေးလိုက တအုပ်ကို ၅၀ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းပေးပါတယ်။ မိုးမခဝက်ဆိုက်ကနေ သည်စာမျက်နှာကနေ တဆင့် https://www.moemaka.com/p/show-your-support-to-moemaka-myanmar.html မှာယူပါ။ မိုးမခသတင်းစာသမားများနှင့် ခွန်ဆိုင်း၊ ဒီခေတ်၊ လှကျော်ဇော၊ သီအိုဇော်၊ ကိုအောင်မှိုင်း၊ နီဇူလိုင်၊ အောင်ဒင်၊ ဘို(မိုးကုတ်)၊ မောင်သံပုံး၊ ခိုင်ကြည်သစ်၊ သီဟလတ်၊ နန္ဒလင်းရှိန်၊ တို့ဆောင်းပါးများ ပါဝင်သည်။ အထူးအစီအစဉ် - မိုးမခနေ့စဉ်သတင်းမြင်ကွင်းမှတ်တမ်း - မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေး တတိယ ရက် ၃၀ မြင်ကွင်းများ - စာအုပ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ဝယ်ယူက ရန်ပုံငွေစျေး ၅၀ ကို ၄၅ $ ဖြင့် အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ရနိုင်သည်။